Iyadoo bartilmaameedyada waxqabadka ee "iftiin, dhuuban, gaaban iyo yar" oo loogu talagalay goobaha batteriga ee kala duwan, soo saarayaasha bateriga ayaa kor u qaaday oo beddelay iyadoo loo eegayo isbeddelada warshadaha qaranka. Baytariyada tamarta iyo baytariyada keydinta tamarta waxay u noqdeen aagag cusub dagaal soo saarayaasha soo saara batteriga. Si loola qabsado kor u qaadista iyo beddelka warshadaha bateriga, Anbotek wuxuu si weyn u xoojiyay maalgashikiisa baytariyada keydinta tamarta iyo sheybaarrada batteriga korontada ku shaqeeya sannadihii la soo dhaafay, wuxuu dhameystiray qalabkii iyo qalabkii lagu baaro batteriga, wuxuu soo bandhigay injineero sare iyo farsamo yaqaanno, wuxuuna noqday hogaamiye ka ah warshadaha tamarta cusub. Saxiix heshiis iskaashi istiraatiiji ah.
• Soo saar warbixinnada imtixaanka adduunka laga aqoonsan yahay iyo shahaadooyinka, iyo bixinta adeegyo la dedejiyey si wax looga qabto baahiyahaaga degdegga ah; Aqoonsiga xaaladaha xamuulka xamuulka Battery Lithium (UN38.3) iyo warbixinta SDS.
• Adeegga qiimeynta waxqabadka bateriga, xalalka tijaabada xirfadeed loogu talagalay alaabtaada.
• Gawaarida qalooca ee UAV, gawaarida golf-ka ee baaskiilka korontada ku shaqeeya, iyo tijaabinta bateriga keydinta tamarta iyo xalalka aalado ayaa hormuud ka ah warshadaha.
• Adeegga tijaabada ah ee batteriga ayaa si adag loo tijaabiyaa iyadoo la raacayo shuruudaha uu bixiyo macmiilku waxaana la soo saarayaa warbixin xirfadeed.
• CNAS iyo CMA waa la ansixiyay
• Shaybaarka baaritaanka ee loo xilsaaray CQC
• Shaybaarka TUV Rheinland CBTL, Shaybaarka TUV Rheinland PTL (Sheybaarka UL Heerka Markhaatiga UL)
• U qalmida iyo oggolaanshaha markhaatiyaasha batteriga ee Intertek iyo shaybaarada nidaamka BMS
• Shaybaarka markhaatiga TUV SUD
Batariga Lithium, batari lithium-ka birta, nidaamka keydinta tamarta guriga, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, gawaarida maroojinta, baaskiilka korontada, gawaarida golf-ka, batteriga keydinta tamarta ee robot-ka, batteriga nikkel-hydrogen nickel-cadmium, batari-acid-ka, batteriga aasaasiga ah (batteriga qalalan), Batariga labaad ee dijitaalka ah, batteriga keydinta tamarta, batteriga korontada, iwm.;
CE \_ UN38.3 \_ Report MSDS \_ SDS Report \_ CQC Certification \_ GB Report \_ QC Report \_ CB Certification \_ IEC Report \_ TUV \_ RoHS \_ Battery Directive UL \_ FCC \_ KC PSE \_ BIS \_ BSMI \_ Wercs \_ ETL \_ IECEE \_ IEEE1725 \_ IEEE1625 \_ GS